Soomaliland oo war yaab leh ka Tiri arin si weyn looga hadal hayey deegaanka laascaanood – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home XULASHADA Soomaliland oo war yaab leh ka Tiri arin si weyn looga hadal hayey deegaanka laascaanood
Soomaliland oo war yaab leh ka Tiri arin si weyn looga hadal hayey deegaanka laascaanood
Posted on January 24, 2018 by admin | 0 Comments
Maamulka Somaliland ayaa amar kusoo rogay shacabka hubka haysta ee ku dhaqanka gobolka Sool, waxaana lagu amray in ay dagaalka ka qayb qaataan ama ay hubkooda soo wareejiyaan.
Warsidaha Puntlandnews.net ayaa ogaaday arrintaan in ay ka dambaysay kadib markii ciidanka Somaliland cabsi ka muujiyeen shacabka hubaysan in ay iyaga kusoo jeestaan haddii dagaalku bilowdo.
Waxaa kale oo arrintan sal ku haysaa inay Somaliland doonayso inay dagaalka galiso shacabka gobolka Sool ee Beesha Dhulbahante si ay gurmad uga helaan isla markaana Beesha kuligeed dagaalka u galiyaan loona waayo cid Puntland taageero u haysa.
Sidoo kale waxaa jira in ciidamada Somaliland gaar ahaan ciidamada Beesha Isaaq ay ku kala jabeen dagaalka ay la galayaan ciidamada Puntland isla markaasna waxaa jira ciidamo badan oo baneeyey furihii dagaalka kuwaas oo xiligani la doonayo cidii buuxin lahayd goobihii ay iskaga baxeen ciidamadaasi.
Waxaa kaloo meesha ku jira qorshe ah inay Somaliland dagaalkaan uga faa’iidaysato inay cadaawad xun kala dhex dhigto beelaha Walaalaha ee Dhulbahante dhexdooda iyo beelaha kale ee Puntland.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa weli isku hor fadhiya jiidda hore deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo dhowaan ay la wareegtay Somaliland, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal ka qarxo deegaankaas oo inta badan shacabkii ka barakacay.
Filed in: DHAGEYSI, HORUMARKA PUNTLAND, WARARKA MAANTA, XOGAHA QARSOON, XULASHADA